सपना अाफ्ना अाफ्नै |
सपना अाफ्ना अाफ्नै
प्रकाशित मिति :2015-06-10 14:51:27
कास्की, जेठ २७ । पोखरा विश्वविद्यालयमा गत हप्ता भएको दिक्षान्त समारोहमा दुई हजार छात्रा दिक्षित भएका छन् । कुल ४ हजारमा दुई हजार महिला दिक्षित भएका हुन् । दिक्षित हुने मध्ये चार जनाले आफ्नो भबिष्यको सपना महिला खवरलाई यसरी सुनाए
महिला तथा बालबालिको क्षेत्रमा काम गर्छु –इन्दिरा पराजुली
पोखरा,जेठ २७ । पोखरा विश्वविद्यालयबाट जेठ २० मा दिक्षित भएका ४००० भन्दा बढी विद्यार्थी मध्ये एक हुन, इन्दिरा पराजुली । २०५४ सालमा वि.एड. उतिर्ण गरेपछि पढाईका बाँकी चाहाना त्यसै थन्काउन बाध्य इन्दिराको सपना यतिबेला पुरा भएको छ ।
आम महिलाको जस्तै साझा समस्या उहाँमा पनि रह्यो जसले गर्दा समयमै पढाइलाई निरन्तरता दिनसक्नु भएन । भित्रदेखिको इच्छा शक्ति भएर होला समय परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्दै रोकिएका पाइला अगाडी बढे । २०७२ सालमा आएर उहाँले स्नातकोत्तर तह पुरा गर्नुभएको छ ।
शिक्षित घरपरिवार हुँदाहुँदै पनि इन्दिराले १८ वर्षपछि बल्ल अर्को तह पार गर्नुभयो । इन्दिरा भन्नुहुन्छ ‘यस पछाडीका कारण धेरै छन् । विवाहपछि महिलाले विभिन्न भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य आइपर्ने जिम्मेवारीलाई पनि निभाउनुपर्ने हुन्छ । महिला शिक्षित भएमा परिवार, समाज हुँदै समग्र राज्य नै सुदृढ हुन्छ भन्ने श्रीमान हुँदाहुँदै पनि मलाई यतिका वर्ष लाग्यो भने अरु महिलाको अवस्था अझै कहाँ होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मैले शिक्षा संकायतर्फ गणित र अर्थशास्त्र लिएर स्नातक पुरा गरी ७ वर्ष शिक्षण पेशा गरेँ ।’
समाज परिवर्तनकालागि महिला स्वयं शिक्षित र सचेत हुनुपर्छ भन्ने इन्दिराले पोखरा विश्वविद्यालयबाट जनसंख्या, लैङ्गिक विभेद र विकासमा अध्ययन गर्नुभयो । अहिले त्यसैसँग सम्बन्धित बाल तथा महिला सशक्तिकरण समाज नेपालमा आबद्ध हुनुहन्छ ।
यहि २० गते दिक्षित भएपटि थप जिम्मेवारी आएको बताउनुहुने इन्दिराले महिला, बालबालिका, आदीबासी र सिमान्कृतहरूका लागि काम गर्ने सोच राख्नुभएको छ । पहिला छोरी भएर अध्ययन गर्दा प्राप्त नतिजामा भन्दा अहिले श्रीमती, आमा, बुहारी र अन्य सामाजिक नातामा गाँसिएपछि प्राप्त गरेको नतिजामा बढी खुसी र सन्तुष्ट मिलेको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो ।
वातावरण विज्ञ बन्न चाहन्छु – भावना कुँवर
दिक्षित हुँदा भावना कुँवरलाई पनि कम खुसी लागेको छैन । पोखरा विश्वविद्यालयबाट छात्रावृत्ति पाई . वातारवरण व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तह पुरा गर्नु भएकी कुँवर शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।
आजपनि शिक्षामा छोरा र छोरीलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने संस्कार पूर्ण विकास हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
घरदेखि टाढा र उच्च शिक्षाकालागि शहर बजार जान नदिने र छोरीलाई बोझ सम्झिने सोच हट्न नसक्नु नै समस्याको मुल जड भएको उहाँको बुझाइ छ ।
हरेक महिला सक्षम, सबल हुन ऊ जन्मे हुर्केको घर परिवार र वातावरणको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । साथसाथै महिला स्वयंमा पनि आत्मविश्वास हुन जरुरी ठान्नुहुन्छ ।
अहिलेको जल्दोबल्दो विषय जलबायु परिवर्तन भएकाले वातावरण व्यवस्थापन विषय रोजेको बताउने भावनाले स्नातक सकिएकाले वातावरण व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्न विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ । विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालकै वातावरणको क्षेत्रमा वातावरण विज्ञको रुपमा आफ्नो नाम र पहिचान स्थापित गराउने लक्ष्य भावनाको छ ।
दक्ष प्राविधिक बन्न चाहन्छु – कृष्णा गिरी
स्नातक तहबाट कम्प्यूटर एप्लिेकेशन उत्तिर्ण गरी दिक्षित भएकोे क्षण सदास्मरण गर्ने बताउनुहुन्छ कृष्णा गिरी
। ‘म सानैदेखि प्राविधिक विषय मन पराउँथे, के महिला, के पुरुष हरेकसँग क्षमता छ भने गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो । तर अझै पनि यस विषयमा महिलालाई भन्दा पुरुषलाई खोज्ने प्रवृत्ति छ ।
महिलाको क्षमता माथिको अविश्वास अझै पनि हट्न सकेको छैन । यस्ता कतिपय अवस्थालाई विस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती हामी माथि छ ।’
नेपालभर स्नातकमा सयजना मात्रै कम्प्यूटर एप्लिेकेशनमा उत्तिर्ण भएका थिए । पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ६५ जनामा ५ जना महिलाले मात्रै यो विषय उत्तिर्ण गर्न सफल भए ।
‘नेपालमा स्नातकोत्तरमा यो विषयको पढाई छैन्, त्यसलै बाँकी पढाई विदेशमा पुरा गर्ने योजनामा छु ’— गिरी भन्नुहुन्छ ।
विदेशमा अध्ययन पुरा गरेपछि नेपालको प्राविधिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने कृष्णा बताउनुहुन्छ । दक्ष र प्राविधिक युवा शक्ति विदेश पलायन हुँदा नेपालको विकासले गति लिन नसकेको उहाँको बुझाइ छ । ‘हरेक क्षेत्रमा चुनौती छ , तर त्यसको सामना गर्न आत्मविश्वास र पारिवारिक सहयोग नितान्त आवश्यक छ ’— उहाँ भन्नुहुन्छ ।
खेलसँगै पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन्छु –राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी परीक्षा गुरुङ
परीक्षा गुरुङ पढाईको महत्व कुनै कुरासँग पनि दाँज्न नसकिने बताउनु हुन्छ । भर्खर वि.वि.ए उत्तिर्ण गरेर दिक्षित हुँदाका रमाइला अनुभव र खुशीका पलहरु ताजै रहेको बताउने गुरुङले यी अवसरहरूले थप जिम्मेवारी बोध गराएको र अझै धेरै परिक्षा दिनुपर्ने चुनौती थपिएको बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय गुरुङ समुदायमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुँदै गएको र लाहुरे खोजेर विवाह गर्ने चलन विस्तारै कम हुँदै गएको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘पहिला बेलायती सेना भएपछि छोरीले नपढेपनि हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो तर अहिले छोरी नपढाई विवाह गर्नुहुँदैन, भन्ने सोच विकास भएको छ ।
मेरा मिल्ने धेरै साथीले व्यवस्थापन बिषय रोजे म पनि लहलहैमा लागें । जे गरे राम्रै गरे एकदम सन्तुष्ट छु । यहि जुलाईमा युके जाँदैछु उतै एम.वि.ए पुरा गर्ने सोचमा छु’— गुरुङले भन्नुभयो ।
श्रीमान पनि बेलायती सेनामा हुनुहुन्छ । पढाईसँगसँगै खेललाई पनि निरन्तरता दिँदै जाने उहाँ बताउनुहुन्छ । एम.वि.ए सकेपछि बैंकिङ्ग क्षेत्र रोज्ने गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७२ जेठ २७ बुधवार